aliminiam-pampana hafanana avo lenta - mpanamboatra milina fanamafisam-peo | vahaolana fanafanana fampidirana
fantson-drivotra avo be
Induction Heating Aluminium Catheter manipika miaraka amin'ny toeram-piasana IGBT
Tanjona: manafana ny catheter vita amin'ny aliminioma maty mihoatra ny 2850F ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 5 segondra ho an'ny famolavolana fitaovana kateter. Amin'izao fotoana izao, ny hafanana dia tanterahina ao anatin'ny 15 segondra miaraka amin'ny fitaovana fampidirana taloha. Ny mpanjifa dia maniry ny hampiasa fitaovana fampidirana fanjakana mafy orina mba hampihenana ny ora fanafanana ary hampivoarana dingana mahomby kokoa.
Fitaovana: Matetika ny kateteran'ny katetika dia mirefy 3/8 ″ OD sy 2 ″ lava miaraka amina tanany tsy metaly amin'ny faritra mafana. Ny fitaovana catheter dia nofaritana ho toy ny plastika polyurethane. Ary koa, tariby vy 0.035 ″ no nampidirina tao anaty fantsom-bokatra mba tsy hianjera.
Fampiharana: Ny famatsiana herinaratra fampidiran-ketra DW-UHF-4.5kW dia tapa-kevitra hamokatra ireto vokatra manaraka ireto:
Fotoana fanafanana 3.3 segondra hahatratrarana 5000F ary hamorona catheter dia tratra tamin'ny alàlan'ny fampiasana roa (2) mihoatra ny roa (2) coil helical.
Ny catheter kalitao dia noforonina tamin'ny fanindriana 1/2 ″ ny fantsona polyurethane ao anaty lasitra ary mitazona endrika amin'ny alàlan'ny fampiasana tariby 0.035 to hisorohana ny firodanan'ny fantsona.
Ny valin'ny laboratoara dia mampiseho fa nisy fihenan'ny fotoana be dia be izay ahafahana mitombo ny famokarana nefa tsy mahafoy ny kalitaony.
Fitaovana: famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana mahery DW-UHF-4.5kW ao anatin'izany ny tobin'ny hafanana lavitra misy capacitor iray (1) mitotaly 1.2 μF.
Sokajy Technologies Tags Heating Aluminum Catheter Tipping, fantson-drivotra avo be, Induction fanolorana aliminioma, fanasitranana fanasitranana, RF fanalefahana aluminio
Induction Heating Aluminum Pipe amin'ny famolahana amin'ny Indépendance induction indépendance
Tanjona amin'ny alàlan'ny fanafanana ny tanky oxygen 2 ambony (50.8mm) mba hamoronana faran'ny boribory misy lavaka misy valizy oksizenina
Fitaovana oxygen oxygen tank miaraka amin'ny savaivony 2.25 "(57.15mm) misokatra, 0.188" (4.8mm) hatevin'ny rindrina
Temperatur 700 ° F (371 ºC)
Fitaovana • Rafitra fanamafisana induction DW-HF-45kW, miaraka amina workhead lavitra misy capacitor 1.5μF roa ho an'ny 0.75μF total
Fomba fanodinana coil helika dimy fihodinana no entina manafana ny faran'ny fisokafan'ny tanky oxygen. Nafanaina nandritra ny 24 segondra ny tanky hahatratra 700ºF (371 ºC).
• Fitsapana amin'ny alalan'ny fanamainana
• Fiatrehana haingana, herinaratra mahomby
• Fomba haingana, azo fehezina ary azo averina
Sokajy Technologies Tags Aluminium induction heater, fantson-drivotra avo be, induction aluminium aluminium, Induction fanolorana aliminioma, RF fanafana aluminium RF, RF fanamainana alimina